Bancoma imizamo emisha yokutakula amabhizinisi amancane akhahlanyezwe yiCOVID-19. USLINDILE KHANYILE uyabika - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Ememezela lesi sikhwama uNgqongqoshe wezeziMali uMnu u-Enoch Godongwana, uthe lesi sikhwama esiwuR15 billion sizosiza amabhizinisi ukuthi abolekwe imali ngamabhange, izikhungo zokuthuthukisa ezibolekisayo nababolekisi abangewona amabhange kodwa abasemthethweni.
UGodongwana uthe: “Uhulumeni uzobambisana nababolekisa ngemali ukubhekelela u-20% wokuqala ozocwila emabhange nakwezinye izinkampani ezincane ezibolekisa ngemali. Uhlelo olusetshenziswayo ukuhlunga abangabolekwa, nesidingo sesibambiso sithi ukuxegiswa.”
Lesi sikhwama sizoqala ukusebenza ngenyanga ezayo. Ngo-Ephreli uthe bazokwethula isikhwama esibolekisayo kodwa esihambisana nokuthi obolekisayo athole amasheya kuleyo nkampani. Uthe imininingwane yaloku izomenyezelwa maduzane.
UGodongwana uthe isiyonke le mali izoba wuR20bn.
UGodongwana umemezele imizamo yokusiza osomabhizinisi abancane
Akusikho okokuqala uhulumeni ethula isikhwama esinjena. Uke wahlinzeka ngoR200bn ngokubambisana namabhange amakhulu. Kepha osomabhizinisi abazange babe klamuklamu ukuboleka leyo mali njengoba kwagcina kubolekwe izinkampani eziwu-13 000 uR18.9bn. Bakhala ngemigomo nemibandela yamabhange, uvalo lokuzifaka kwezinye izikweletu ekubeni umnotho untenga nangemidanti okwakufanele bayigcine.
Inhlangano yamabhizinisi eThekwini iDurban Chamber of Commerce and Industry isishayele ihlombe lesi simemezelo. Ithe ikholwa wukuthi yindlela efanele yokweseka amabhizinisi amancane.
I-Durban Chamber of Commerce and Industry ithakasele ukumenyezelwa kwesikhwama esizosisa amabhizinisi amancane
Iqhube yathi kungakuhle uhulumeni asebenzisane nemboni ezimele ukuqikelela ukuthi kuba yimpumelelo.
Isikhulu esiphezulu seBusiness Leadership South Africa uNksz uBusi Mavuso sithe: “Kuyasikhuthaza ukuzwa ngesikhwama sokuvuselela amabhizinisi. Lesi sikhwama singakwazi ukusiza imikhakha ekhahlanyezwe kakhulu wubhubhane, ikakhulukazi imboni yezokuvakasha. Ukuze siphumelele, kumele osomabhizinisi bakhululwe endleleni abazosebenzisa ngayo imali nendlela abazokhokha ngayo. Iningi lalabo somabhizinisi bangabaqashi kodwa abakwazi ukuthola imali yokuthi bavule izindawo zabo kabusha. Sithemba ukuthi lesi sikhwama sizosiza ikakhulukazi lezo zinkampani.”
UNksz uMavuso, isikhulu esiphezulu seBusiness Leadership South Africa
Usomnotho omkhulu eFNB uNkk uMamello Matikinca-Ngwenya uthe lesi Sabelomali sikhombisa ukuzinikela kukahulumeni ukuqinisekisa ukuthi umnotho uphathwa ngokucophelela. Uthe bakholwa wukuthi lokhu yinto engazuzwa ngokuthi kuncishiswe izindleko futhi kuphuthunyiswe izinhlelo zokuguqula umnotho.
UNkk Matikinca-Ngwenya, usomnotho omkhulu eFNB
ISabelomali sikaGodongwana sigxile ekuzameni ukulekelela izakhamuzi ukuthi zinciphise izindleko zempilo njengoba enze izimemezelo ezizokwenza ukuthi zonge uR5.2bn. Iqalile nemizamo yokwehlisa isikweletu sezwe, okumanje siwuR4.3 trillion.